ကျနော်တို့ လက်ရှိကားလောကမှာ ဆီတိုင်ကီထဲက ဆီပန့်ပြဿနာကြောင့် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကားဝပ်ရှော့ပို့ ပြုပြင်နေရတဲ့ ကားတွေမနည်းလှပါဘူး။ ကားပိုင်ရှင်တွေလည်း ဒီဆီပန့်ပြဿနာကြောင့် ကားမောင်းရတာ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရ၊ ကားပြုပြင်ရတာ ငွေကုန်ကြေးကျများရနဲ့ ဒုက္ခများလှပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ဆီတိုင်ကီထဲက ဆီပန့်တွေကို ဘယ်လိုသက်တမ်းကြာရှည်အောင် သုံးစွဲသင့်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် အချက်လေးတွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
အခုကျနော်တို့ လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ EFI (Electronic Fuel Injection) နည်းပညာသုံး ကားတွေတိုင်းမှာ မရှိမဖြစ်အရေးပါတာက ဆီပန့်ပါ။ ဒီဆီပန့်ကို အရပ်ထဲမှာ ဆီပန့်၊ တိုင်ကီပန့် အမျိုးမျိုးခေါ်ဝေါ်နေကြပေမဲ့၊ ဒီကောင်လေးရဲ့နာမည်အစစ်က Electric Fuel Pump လို့ခေါ်ပြီး DC လျှပ်စစ်ဖြင့် မောင်းနှင်ထားတဲ့ ပန့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆီပန့်ရဲ့ အဓိကတာဝန်က ဆီတိုင်ကီထဲကဆီတွေကို အင်ဂျင်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ ဆီဖြန်းပေးတဲ့ Injector တွေဆီကို ဆီ ပို့ဆောင်ပေးတဲ့တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ပါတယ်။ ဒီလို လောင်စာဆီတွေကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရတဲ့အခါမှာ ပုံမှန်ရိုးရိုးသယ်ယူပို့ဆောင်လို့ မရပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ယခု EFI နည်းစနစ်အရ အင်ဂျင်ခန်းထဲကို မီးလောင်ပေါက်ကွဲဖို့လိုအပ်တဲ့ လောင်စာဆီတွေကို Injectors တွေသုံး ဖြန်းသွင်းရတဲ့အခါမှာ လောင်စာဆီတွေကို သေးငယ်တဲ့ ဆီအမှုန်အမွှားလေးတွေအဖြစ် ဖြန်းသွင်းပေးဖို့ လိုလို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီလောင်စာဆီတွေကို ဆီအမှုန်အမွှားလေးတွေဖြစ်အောင် ပန်းသွင်းပေးဖို့ Pressure ဆိုတဲ့ အားပြင်းတဲ့ ဖိအားတစ်ခု လိုအပ်လာပါတယ်။ ဒီလို လိုအပ်တဲ့ဖိအားကိုရရှိအောင် ဒီဆီတိုင်ကီထဲက ဆီပန့်ကပဲ တွန်းပေးရတာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီဆီတိုင်ကီထဲက ဆီပန့်တွေဟာ သာမာန်ရိုးရိုးပန့်တွေမဟုတ်ဘဲ အင်ဂျင်ကလိုအပ်တဲ့ ဆီဖြန်းသွင်းစနစ်အတွက် ဖိအားတစ်ခုရရှိအောင် အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့ ဆီပန့်တွေပါပဲ။
ပုံမှန်အားဖြင့် ဒီဆီပန့်တွေရဲ့ ဖိအား (Pressure) က အနိမ့်ဆုံး 30 ကနေ အမြင့်ဆုံး 100 Psi ကျော်ကျော်အထိ ရှိတတ်ပါတယ်။ (ကားအမျိုးအစား အင်ဂျင်အမျိုးအစားပေါ်လိုက်ပြီး အနည်းအများ ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်)။ ဒီဆီပန့်ကနေပို့လိုက်တဲ့ ဆီ Pressure က သတ်မှတ်ထားတဲ့ Pressure လိုအပ်ချက်အတွင်းမှာပဲ ရှိနေမယ်ဆိုရင် အင်ဂျင်ဟာ ပုံမှန်အတိုင်း ချောချောမွေ့မွေ့ အဆင်ပြေပြေ လည်ပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆီပန့် Pressure ကျသွားပြီဆိုတာနဲ့ အင်ဂျင်တုန်တာခါတာ၊ အင်ဂျင်အဆွဲအရုန်းကျတာ၊ အင်ဂျင်နှိုးရခက်တာ၊ နှိုးမရတော့တာ စတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Electric Fuel Pump တစ်ခု ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ?
ကားမောင်းမယ့်သူက ကားသော့ကို On လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ PCM (Powertrain Control Module) ကနေ Pumps Relay တွေကို ကပ်စေပြီး Electric Fuel Pumps တွေဆီကို လိုအပ်တဲ့ Power Supply Voltage ရောက်စေပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ Volt အားတွေပန့်ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ပန့်က ထလည်ပြီး စက္ကန့်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာ ဆီတွန်းပို့ဖို့လိုအပ်တဲ့ Pressure တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကားသော့ On ထားပြီး စက်မနှိုးမချင်း ဆီတိုင်ကီထဲကဆီပန့်တွေ လည်ပတ်မနေအောင် PCM ကနေ အချိန်တိုင်ပင်တစ်ခုလုပ်ထားပြီး ထိန်းချုပ်ထားပါသေးတယ်။
စက်စနှိုးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဆီတိုင်ကီထဲကဆီတွေဟာ ဆီစစ်စကာ (Filter) နဲ့ Inlet Tube တွေကနေတစ်ဆင့် ဆီပန့်ထဲစတင်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ One Way Check Valve ကိုဖြတ်ကျော်ပါတယ်။ One Way Check Valve ဆိုတာကတော့ ကျနော်တို့ရေဘုံဘိုင်တွေမှာသုံးတဲ့ ဘီလူးခေါင်းလိုပါပဲ။ ဒီကောင်လေးက ပန့်မလည်ဘဲ စက်သတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ ဒီပန့်ထဲမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဆီဖိအားတစ်ခုကျန်နေအောင် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ကောင်လေးပါ။
ဆီစစ်ဇကာ (Filter) ကတော့ ဆီတိုင်ကီထဲမှာဝင်ရောက်နေတဲ့ အညစ်အကြေးတွေ ဆီပန့်ထဲကိုဝင်ရောက်ပြီး ဆီပန့်ပျက်စီးတာကို ကာကွယ်ဖို့ရယ်၊ နောက် ဆီပန့်ကနေတစ်ဆင့် ဆီဖြန်းပေးတဲ့ Fuel Injectors တွေဆီ ရောက်ရှိပြီး Injectors တွေ မပျက်စီးအောင်ကာကွယ်ပေးဖို့ရယ် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
ဒီ Electric Fuel Pumps တွေဟာ အင်ဂျင်စက် စ စနှိုးလိုက်တာနဲ့ စတင်အလုပ်လုပ်ပြီး၊ အင်ဂျင်လည်ပတ်နေသမျှကာလပတ်လုံး တောက်လျှောက်မရပ်မနား အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Electric Fuel Pumps တွေဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပုံမှန် Speed နဲ့ လည်ပတ်နေပြီး၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ အင်ဂျင်ရဲ့ လည်ပတ်နှုန်းနဲ့ သုံးစွဲတဲ့ဝန်အားအပေါ်မူတည်ပြီး အနှေးအမြန် ပြောင်းလဲလည်ပတ်ပါတယ်။
ဒီလိုအချိန်မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အင်ဂျင်ရုတ်တရက်ထိုးရပ်သွားတယ်ဆိုရင် PCM ကနေ PRM Loss Signal ကို ပေးပို့ပြီး Electric Fuel Pump ကို လှမ်းရပ်ထားလိုက်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ပုံမှန် EFI စနစ်ကားတွေမှာပါတဲ့ Electric Fuel Pump တစ်လုံးရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ အကြမ်းဖျင်းလေးပါ။
Electric Fuel Pumps တွေဘာကြောင့် ပျက်စီးရသလဲ?
၁။ ဆီတိုင်ကီထဲကဆီကို ကုန်ခါနီးအထိသုံးတာ
ဆီတိုင်ကီရဲ့ ဆီဝင်ဆန့်နိုင်မှု ပမာဏ ၄ ပုံ ၁ ပုံအောက်ကျအောင် အမြဲသုံးစွဲတယ်ဆိုရင်တော့ ဆီတိုင်ကီထဲက ဆီပန့်တွေရဲ့ သတ်မှတ်သက်တမ်းပြည့်သည်အထိ သုံးစွဲနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆီဂိတ်ဖင်ကပ်မှ ဆီဖြည့်တာ၊ ဒိုင်ခွက်မှာ ဆီတိုင်ကီမီးလင်းလာတဲ့အထိ ဆီကုန်အောင်သုံးတဲ့အလေ့အထတွေက ဆီပန့်မြန်မြန်ကြွမဲ့ အလေ့အထတွေပါပဲ။
နောက်တစ်ချက် အပေါ်မှာရှင်းပြခဲ့သလိုပါပဲ၊ ဆီတိုင်ကီထဲကဆီပန့်တွေက သတ်မှတ် Pressure အတိုင်းမောင်းနှင်ရတဲ့အခါမှာ၊ ဆီတိုင်ကီထဲမှာ ဆီကျန်နည်းနေမယ်ဆိုရင် ဆီထုရဲ့ ဖိအားမရှိတဲ့အတွက် ဒီဆီပန့်တွေဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Pressure ရောက်အောင် ထိန်းထားဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒီလို သတ်မှတ် Pressure အလွယ်တကူမရတဲ့အတွက် ဆီပန့်ဟာ နဂိုထက်ပိုပြီး အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီ Electric Fuel Pump Overworked ဆိုတဲ့ အလွန်အကျွံအလုပ်လုပ်ရတာမို့လို့ သက်တမ်းမြန်မြန်တိုစေပါတော့တယ်။
၂။ ဆီထဲမှာ ရေ ရောနှောပါလာတာ
လောင်စာဆီတွေထဲမှာ ရေ ရောနှောပါလာတာကလည်း Electric Fuel Pumps တွေကို မြန်မြန်ပျက်စီးစေပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကို ဘယ်အချိန်မှာတွေ့ရတတ်သလဲဆိုရင် ကားတွေကို အသုံးမပြုဘဲ ရက်၊ လ များစွာရပ်ထားတတ်တဲ့ ကားတွေမှာ အဖြစ်များတတ်ပါတယ်။ လောင်စာဆီတွေထဲမှာ ရောနှောပါလာတဲ့ ရေခိုးရေငွေ့ (Moisture) က ဒီဆီပန့်ထဲမှာရှိတဲ့ သတ္တုအစိတ်အပိုင်းတွေကို ပျက်စီးစေတတ်ပြီး ပန့်တွေကို သုံးမရအောင် ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က တချို့လောင်စာဆီတွေထဲမှာ ရောပါလာတတ်တဲ့ Ethanol (အရက်ပျံ) တွေကလည်း ရေခိုးရေငွေ့ပျံမှုတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်စေတတ်ပြီး ဆီတိုင်ကီထဲမှာရှိတဲ့ သတ္တုအမျိုးမျိုးကို ပွန်းစားပျက်စီးစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကတော့ ဆီထဲက ရေခိုးရေငွေ့တွေက ဆီဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကို တိုင်းတာပေးတဲ့ Fuel Level Sensors တွေ ပျက်စီးစေမှု အများဆုံးဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုဆိုရင် ဆီမသန့်တဲ့၊ ဆီအရောအနှောများတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆီဂိတ်မမှန်လို့ ပြုပြင်ရတဲ့ကားတွေ များပြားလှတာဖြစ်ပါတယ်။
ကားတွေကို ရပ်ထားတာကြာပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးကတော့ ဆီတိုင်ကီထဲက ဆီအဟောင်းတွေကိုဖောက်ချပြီး၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ် အသစ်ထည့်အသုံးပြုတာကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
၃။ ဆီအရည်အသွေးမပြည့်မီတာ (ဝါ) ဆီမသန့်တာ
ဆီအရည်အသွေးမပြည့်မီတာ၊ ဆီမသန့်တာကြောင့် ဆီတိုင်ကီထဲက Electric Fuel Pumps တွေအပျက်များတာကိုတော့ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နည်းနည်းလေးထပ်ရှင်းပြချင်ပါသေးတယ်။ ဆီတိုင်ကီထဲကို ဆီထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် ဒီဆီမှာပါဝင်တဲ့ အရာတွေအားလုံးက ဆီတိုင်ကီကနေ ဆီပန့်ထဲကိုရောက်ပါတယ်။ ဆီတိုင်ကီမှာပါလာတဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို သန့်စင်ဖို့ ဆီစစ်ဆန်ကာ (Fuel Filter) ပါရှိပေမဲ့ ကံမကောင်းစွာပဲ ဒီဆီစစ်ဆန်ကာတွေဟာ 70 Microns အရွယ်အစားရှိတဲ့ အမှုန်အမွှားလေးတွေကိုပဲ စစ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီ 70 Microns အရွယ်ထက်ငယ်တဲ့ အမှုန်အမွှားတွေဟာ ဆီစစ်ဆန်ကာကနေဖြတ်ပြီး ဆီပန့်ထဲရောက်ပြီး အချိန်ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှ ဆီပန့်တွေကို ပျက်စီးစေပါတော့တယ်။ 92 Ron ၊ 95 Ron အစရှိတဲ့ အရည်အသွေးပြည့်မီတဲ့ ဆီတွေကိုသုံးစွဲတာကလည်း သင့်ကားရဲ့ ဆီပန့်တွေ အသက်ရှည်စေကြောင်း နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဆီပန့်တွေ မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင် ဘယ်လို လက္ခဏာတွေပြလာမလဲ?
၁။ ဆီတိုင်ကီထဲက ဆီပန့် အသံကြမ်းလာတာ
ပုံမှန်အားဖြင့် ဆီတိုင်ကီထဲက Electric Fuel Pumps တွေဟာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် အသံမကြားရသလောက် ညင်သာပါတယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ဆီတိုင်ကီထဲက ဆီပန့်တွေ ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင် ဆီပန့်တွေရဲ့ လည်ပတ်တဲ့ အသံကြမ်းလာတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အရပ်ထဲမှာတော့ ဆီပန့် ညည်းသံလို့ ခေါ်ဝေါ်ပါတယ်။ ဒီအသံကြားရတယ်ဆို ဖြစ်နိုင်တာတွေက ဆီတိုင်ကီထဲမှာ ဆီမရှိတော့တာ၊ ဆီပန့်ပျက်ချင်တာ၊ ဆီစစ်စကာကြေးတွေပိတ်တာ အစရှိတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၂။ Start ရှည်တာ၊ အင်ဂျင်အနှိုးခက်တာ
ဒီပြဿနာလေးက အဖြစ်များတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုပါပဲ။ ခုတလောလေးမှာတင်ကို ဒီလိုပြဿနာနဲ့လာတဲ့ ကားတွေမနည်းပါဘူး။ ကားဝပ်ရှော့လောကမှာတော့ Start ရှည်တာ ဒါမှမဟုတ် အင်ဂျင်အနှိုးခက်တာလို့ ပြောကြတာများတယ်။ ဒီလိုဖြစ်စေရတဲ့ ပြဿနာအကြောင်းအရင်းတစ်ခုက ဒီဆီပန့်နဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဆီပန့်တွေက ပုံမှန်အားဖြင့် အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ သော့ဖွင့်လိုက်တယ်၊ On လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ စ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပန့်ကသိပ်မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင် စက္ကန့်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာ လုံလောက်တဲ့ Pressure ရအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီတော့ သော့ဖွင့်ပြီး စက်တန်းနှိုးလိုက်တယ်ဆိုရင် အင်ဂျင်လည်တာ အရင်ကထက်ပိုကြာပြီး စက်ချက်ခြင်း မနှိုးဘဲ စက်အနှိုးရခက်တာတွေကြုံလာရတာပါပဲ။
၃။ အင်ဂျင် တုံ့ဆိုင်းသွားတာ
ဒီလို အင်ဂျင်တုံ့သွားတာက ပုံမှန်မောင်းနေချိန်အဖြစ်နည်းပြီး အရှိန်နဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် မောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်တော့ ဆီတိုင်ကီထဲကဆီပန့်က အင်ဂျင်ကလိုအပ်တဲ့ဆီကို ပုံမှန်ပေးပို့နေရာကနေ ရုတ်တရက် ဆီပေးမှု၊ ဆီတွန်းပို့မှု နှောင့်နှေးသွားလို့ဖြစ်ရတာပါပဲ။ ဒါဟာလည်း ဆီတိုင်ကီထဲက Electric Fuel Pump ချို့ယွင်းလာရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါတစ်ခုပါပဲ။
၄။ ဝန်ရုန်းတဲ့အခါမှာ အင်ဂျင်ရုန်းအားကျတာ
ဒီလိုရောဂါအဖြစ်များတာကတော့ တောင်ပေါ်တွေ၊ ကုန်းတက်တွေကို တက်တဲ့အခါနဲ့ ကားပေါ်ပစ္စည်းတွေ၊ ကုန်တွေတင်ပြီး အရှိန်တင်မောင်းနှင်တဲ့အခါမှာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုရင် အင်ဂျင်ထိုးရပ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ဝန်ရုန်းတဲ့အခါမှာ အင်ဂျင်ပိုမိုလည်ပတ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ လောင်စာဆီ Pressure ကို ဆီပန့်က တွန်းပို့မပေးနိုင်တော့လိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ဆီစားနှုန်း မမှန်တာ
ပျက်စီးယိုယွင်းလာတဲ့ ဆီပန့်တွေကြောင့် ကားရဲ့ ဆီစားနှုန်း မမှန်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုရင် ဆီပန့်တွေထဲမှာ အဖွင့်အပိတ် Valves တွေပါဝင်ပြီး အဲဒီကောင်တွေချို့ယွင်းလာတယ်ဆိုရင် ဖွင့်ချိန်ပိတ်ချိန်တွေ မမှန်တာကြောင့်ရယ်၊ ဆီပန့်တွေရဲ့ သတ်မှတ် Pressure တွေကို သေချာမထိန်းချုပ်နိုင်တာတွေကြောင့်ရယ် ဆီပို ပို့တာ၊ ဆီနည်းနည်းပဲပို့တာတွေဖြစ်စေပြီး ဆီးစားနှုန်း မညီမညာဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ဆီတိုင်ကီထဲမှာရှိတဲ့ Electric Fuel Pump လုံးဝ ဂန့်သွားတဲ့အခါမှာဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာပါပဲ။ သော့ဖွင့်မယ်၊ စက်နှိုးမယ်၊ အင်ဂျင်ကလည်း လည်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ စက်လုံးဝမနိုးတော့ဘူးဆိုရင် အဖြစ်အများဆုံး ဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံး ပြဿနာက ပန့်မလည်တော့တာ၊ ပန့်လည်သည့်တိုင်အောင် လုံလောက်တဲ့ဆီ မပို့တော့တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေက ဆီတိုင်ကီထဲက Electric Fuel Pumps တွေ ပျက်စီးယိုယွင်းလာရင် ဖြစ်လာတတ်တဲ့ ပြဿနာတွေပါပဲ။ အဲဒီတော့ ဆီတိုင်ကီထဲက ဆီပန့်တွေကို ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်အောင် သေချာဂရုစိုက်ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။ ဆီတိုင်ကီထဲက ဆီပန့်တွေဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် ကီလို 160,000 ကီလိုနီးပါးလောက် အသုံးခံတတ်ပါတယ်။
အပေါ်မှာပြောထားသလို ဆီတိုင်ကီထဲက ဆီ Level ကို4ပုံ 1 ပုံထက် လျော့အာင်မသုံးတာ၊ ဆီတိုင်ကီပန့်ကို ဖြုတ်ဆေးကြောတာ၊ ဆီသန့်သန့်ရွေးချယ်ဝယ်ယူသုံးစွဲတာ အစရှိတဲ့ အမူအကျင့်ကောင်းတွေကို လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဆီတိုင်ကီထဲက Electric Fuel Pumps တွေကို သက်တမ်းစေ့သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆီတိုင်ကီထဲက Electric Fuel Pumps တွေဟာ ကားတစ်စီးရဲ့ အင်ဂျင်လည်ပတ်ဖို့အတွက် မရှိအဖြစ်အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆီပန့်မကောင်းရင် ပြဿနာမျိုးစုံကြုံရပြီး ကားမောင်းသူတွေအတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆီတိုင်ကီထဲက ဆီပန့်တွေရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေအကြောင်းသိပြီး ဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာ တင်ပြဆွေးနွေး လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ။
စာဖတ်သူမိတ်ဆွေညီအစ်ကို မောင်နှမအားလုံး နည်းပညာ ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝကြပါစေခင်ဗျာ။
မြန်ဆန်မှု၊ တောက်ပမှု၊ ဆွဲဆောင်အားပြင်းပြမှုတွေကို မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Lexus LC500 2019